Daawo+Dhageyso Xakiimul Ummah Oo Ka Hadlay Xaalada Shaam. – Bogga Calamada.com
December 3, 2017 5:25 am Views: 859
Aynu la dagaallanno Gaalada inagoo hal saf ah, waa ciwaanka kalimad qayim ah oo uu jeediyay Sheykh Ayman AlDawaahiri Xafidahullaah,Amiirka guud ee Qaacidatul Jihaad, ayna baahisay mu’assasada Al-Saxaab.
Kalimadan oo la dhageysan karo inkabadan 30 daqiiqo loona intaajiyay hab Video ah, waxaa uu Xakiimul Ummah Sheekh Dr Ayman Al-dawaahiri kaga hadlayaa arimo xasaasi ah oo inkabadan hal sano mugdi uu ku jiray, isagoona dhanka kale diraya rasaa’il kala duwan oo kudaba feylaya kuwii horey uu ugu jeediyay mujaahidiinta Shaam oo ah iney midoobaan, siina wadaan dagaalka Jihaadka ah.
Ugu horeyn Sheykh Ayman wuxuu soo hadal qaaday tallaabadii Jabhatu Nusra ee isku bedeshey Fatxu Shaam ay ku shaacisay iney kaga baxday Al-Qaacida, taas oo xilligii lagu dhawaaqayay ay dada badani moodayeen in hogaanka Al-Qaacida uu wax ka ogyahay, islamarkaana raalli ka yahay.
Sheeykh Ayman ayaa sheegaya in arintaas ay dhacday iyagoo aan waxba ka ogeyn, wuxuuna arinta dhacday ku tilmaamay iney tahay beyco sharci ah oo la jabiyay, iyadoo mar marsiyo aan waxba ka jirin la adeegsanayo .
Halkan ka dhagyaso Warbixin ku saabsan kalimadda Sheykh Ayman Fakul Irtibaadka
Halkan Ka Daawo Kalimada Dr Ayman Al-dawaahiri.
Halkan Ka Doono Linkiyo Fara Badan Oo Kalimada Ah.